Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । लाभांश र एफपीओ जारी मुख्य अजेन्डासहित महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आठौँ वार्षिक साधारणसभा आज बुधबार हुनेछ। सप्तरीको महुलीस्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने वार्षिक साधारणसभाबाट गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन हुनेछ। जसमा २० प्रतिशत बोनस सेयर र...
महुली लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा चैत २५ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको हिजो शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही चैत २५ गते बुधबार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा सप्तरीको महुलीस्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडद्वारा गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको लाभांश स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले महुली लघुवित्तद्वारा प्रस्ताव गरिएको कुल २१.०५ प्रतिशत स्वीकृत गरेको हो। महुली लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश...
महुली लघुवित्तको नाफा ८३.६१%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक संस्थाको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८३.६१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्ज गरेको...
महुली लघुवित्तको सेयर कारोबार फुकुवा, आइतबारबाट किनबेच हुने
काठमाण्डौ। नवकिरण लघुवित्तसँग मर्जरमा गएको महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर कारोबार बिहीबार फुकुवा भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मर्जर प्रयोजनका लागि रोक्का गरिएको महुली लघुवित्तको सेयर कोरोबार फुकुवा गरिएको जानकारी गराएको हो। अब यो कम्पनीको सेयर कारोबार आगामी आइतबारदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा आउने...